5 Zvinhu Zvekubudirira Kwekutengesa Kurovera | Martech Zone
Muvhuro, April 2, 2012 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Isu munguva pfupi yapfuura takabatana-pamwe nevatengi vedu, TinderBox, pa 5 Zvinhu zveKubudirira Kwekutengesa Kurovera. Mharidzo yacho iri nyore uye mhinduro yacho yanga yakanaka. Zvichitaurwa zviri nyore, zvakanyanya senge mamwe marongero atiri kuona… kugona kunyora kwakakura kutengesa chikumbiro kuri kubatsira kushandura akawanda tarisiro kuva vatengi. Rini DK New Media kutanga kutanga, takapedza mazuva tichinyora zvirevo zvaive nemakumi maviri, makumi matatu nemakumi mana mapeji akareba. Yedu yekutengesa zvirevo izvozvi zvakagadziriswa, zvipfupi, uye kusvika poindi.
Mharidzo yakanaka. Ndatenda Douglas nekuenderera mberi uchitibatsira kutamisa mafungiro edu kuti mutengi 'mutsva' anofunga sei.
Kutenda zvakanyanya pamashoko emutsa, @ twitter-237502821: disqus!
Izvo zvinotyisa zvinoita kuti muzvinabhizimusi mudiki azive nezve kushambadzira kuti ungashambadza sei zvigadzirwa zvako zvine mhando uye zvakapusa.